I-Fossil ibonisa uluhlu lwayo olutsha lwe-smartwatch nge-Wear OS | Iindaba zeGajethi
I-Fossil yenye yeempawu ezithi zibukele amandla nge-Wear OS, Inxalenye yokuba uGoogle utyale imali eninzi kweli candelo lenkampani. Ifemi ngoku isishiya nesizukulwana esitsha, isihlanu xa sisonke. Basishiya neewotshi ezimbini ezahlukeneyo, ezahluke kancinane phakathi kwabo, into eyiliweyo kunye nemibala.
Eyokuqala kubo Julianna HR, ebalaseleyo ekuyileni ubufazi ngakumbi kunye namacandelo egolide-epinki. Ngelixa imodeli yesibini esishiywa yiFossil nguCarlyle HR, kunye nokudayala okumnyama nokungwevu kunye noyilo lobudoda ngokubanzi. Iinketho ezimbini, ezinemibala emininzi kwimeko nganye.
Ubungakanani kunye nobukhulu, kunye neenkcukacha, Bayafana kule meko. I-brand ingenise imisebenzi emitsha kolu luhlu lweewotshi, iyenza icace into yokuba yenye yeefemu ekufuneka ziqwalaselwe kweli candelo lentengiso. Ke zibonisiwe njengeendlela ezimbini ezilungileyo onokuzithenga kwicandelo lewatchwatch.
1 Ukucaciswa kweFossil Gen 5
Ukucaciswa kweFossil Gen 5
Inkampani ihlaziye ngokucacileyo uluhlu lwayo. Basishiya neewotshi ezimbini ezilungileyo, ezineenkcukacha ezifanayo kuwo omabini la matyala, njengoko besele kusaziwa njalo. Ukongeza, i-Fossil ibandakanya uthotho lwemisebenzi emitsha kubo, ukuyenza iwotshi epheleleyo ngakumbi, ukuze babenakho ukukhuphisana nezinye iimveliso kule ndima, ezinje ngeSamsung okanye iXiaomi. Oku kukucaciswa kwayo okusemthethweni:
Bonisa: 1,28 intshi ye-AMOLED ngesisombululo sepikseli esingu-328 x 328
Inkqubo: I-Snapdragon Wear 3100
Ukugcinwa kwangaphakathi: 8 GB
Inkqubo yokusebenza: Nxiba i-OS
Ibhetri: iiyure ezingama-36 zokuzimela kunye nokuhlawula ngokukhawuleza
Ukunxibelelana: I-Bluetooth 4.2 LE, iWiFi, iNFC, iGPS
Iyahambelana ne-Android 4.4 okanye ngaphezulu kunye ne-iOS 9.3 okanye ngaphezulu
Ukumelana namanzi: 3 iATM
Izixhobo: I-Altimeter, Ukukhanya okuKhanyayo, iGyroscope, iNqanaba leNtliziyo
Abanye: Iimowudi zebhetri, ukutshaja ngemagnethi, ulawulo lomculo
Imilinganiselo: 44 x 44 x 12 mm
Zimbini izinto ezintsha ezinqabileyo kwesi sizukulwana sitsha seewatchwatches ezivela kwiFossil. Kwisandle esinye, uphawu lazise isithethi kwiwotshi, eya kuthi isinike amathuba amaninzi okusetyenziswa. Uluvo kukuba singayisebenzisa ukulawula umculo, ukutshintsha iingoma okanye ukuwusebenzisa kwimisebenzi enje ngokusebenzisana nelizwi noMncedisi kaGoogle kunye nokuguqulela nangaliphi na ixesha. Ke ithembisa ukuba yinto ephambili kule wotshi.
Kwakhona, Esi sizukulwana sitsha seFossil siza neemowudi zebhetri ezintsha. Inkampani iyazi ukuba ukuzimela komlindo yinto ehlala ikhathaza abasebenzisi, abafuna ukuba nokuzimela okukhulu kwimeko yabo. Ke ngoko, sifumana iinketho ezininzi malunga noku, eziya kuthi zisivumele ukuba siqwalasele kwaye senze ibhetri yewotshi ngale ndlela. Iindlela esinazo zezi:
Imowudi yebhetri eyandisiweyoYenziwe kuphela yimisebenzi ebalulekileyo yomlindo
Imo yemihla ngemihla: Sinemisebenzi emininzi enikwe amandla kuyo. Kunokuthiwa yindlela eqhelekileyo yokusetyenziswa kwewotshi
Imowudi yesiqheloUmsebenzisi ngulo uthatha isigqibo sokuba makenze ntoni kwaye yeyiphi imisebenzi kunye noseto oluhlala luvuselelwe
Imo yexesha kuphelaIwotshi iyatshintsha ukubonisa kuphela ixesha lokuphepha ukusetyenziswa kakhulu kwebhetri
Ukuphumla, singasebenzisa imisebenzi yesiqhelo ekubukeni kule meko. Ukusuka ekuboneni izaziso, ukufumana iifowuni, ukumamela umculo kunye nokugcina umkhondo womsebenzi womsebenzisi ngalo lonke ixesha. Akukho mmangaliso mkhulu kule meko yabasebenzisi abanomdla kwezi modeli zeFossil.
Esi sizukulwana sitsha seFossil Sele ithengisiwe kwiwebhusayithi esemthethweni yenkampani, Ukongeza kwiindawo ezikhethiweyo zentengiso. Nangona okwangoku kungenakwenzeka ukuba ubathenge ezivenkileni eSpain kwaye akukho zinkcukacha zinikiweyo malunga nokwaziswa kwabo. Akufuneki ukuba kuthathe ixesha ukuba ibe semthethweni, kodwa kuya kufuneka silinde iindaba.
Zonke iimodeli zixabiso elifanayo, njengoko iinkcukacha zazo ziyafana. I-Fossil isete ixabiso le- $ 295 kwezi wotshi, eziza kuphehlelelwa kwezi veki kwihlabathi liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » SmartWatch » I-Fossil iveza isizukulwana sayo esitsha seewotshi nge-Wear OS
Yintoni umahluko phakathi kwe-5G NSA kunye ne-5G SA